Ugaandha - ALinks
Maqaallada ku saabsan Uganda
Bangiyada Yugaandha !!
December 1, 2019 Karuna Chandna lacag, Uganda
Bangiyada wanaagsan ee Yugaandha !! Guudmarka Bangiyada ku yaal Uganda Bangiyada ku yaal dalka Uganda waxaa kormeeraya Benki Kuu ya Uganda ama Bank of Uganda, Bangiga dhexe ee waddanka. Waa bangi ay dowladdu leedahay oo la asaasay 1966.
NIDAAMKA DARYEELKA CAAFIMAADKA QARANKA EE UGANDA
December 1, 2019 Karuna Chandna caafimaadka, Uganda
Daryeelka caafimaadka ee Ugandha Ugandha waxay leedahay nidaam caafimaad oo abaabulan iyo gaarsiinta caafimaadka oo kajirta shaqada istiraatiijiga ah iyo diiradda (HSSIP 11, July 2010) Nidaamka caafimaadka qaranka wuxuu ka kooban yahay qaybaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ahba. Kuwa gaarka loo leeyahay
Dukaameysiga Yugaandha !!
December 1, 2019 Karuna Chandna wax in la sameeyo, Uganda
Kampala waa magaalo xiiso u leh dukaameeystayaasha maxaa yeelay wax walba oo aad u baahan karto waa diyaar oo diyaar ah. Hababka casriga ah ee ka socda caasimadaha kala duwan ee adduunka, Dukaamada, Elektaroonigga, guryaha, hadiyado iyo waxyaabo kaloo badan Inta badan dukaamaysiga magaalada Kampala waxay ku badan yihiin suuqyada laga dukaameysto
Meelaha ugu wanaagsan ee lagu booqdo Yugaandha !!
Meelo Lagu Booqdo Uganda !! Ugaandha, inteeda badan, waa meel ammaan ah oo xiiso leh. Waa dhul ay Hippos ka soo dhex baxdo dhulka qoyan iyo libaaxyada oo ku daaqa qarka. Waa dhul keymo rooban iyo buuro ceeryaamo leh
Hoteellada jaban ee Yugaandha !!
Hoteelada Uganda !! 1) Shangri-la Hotel Kampala 4.0 xiddig - Qiimeynta Google 3-xiddig Hotel Shangri-la Hotel Uganda waa mid ka mid ah Hoteellada ugu amniga badan uguna muhiimsan bartamaha magaalada Kampala. Waxay ku taal meesha ugu muhiimsan ee naadiga caanka ah ee Kampala Club. Iyada oo diirran
Ka shaqee Uganda !!
Waxaa laga yaabaa 15, 2019 Maitri Jha shaqo, Uganda
Uganda waa dal soo koraya oo leh aragti koboc wanaagsan. Sanadaha soo socda, dhaqaalahooda wuxuu muujinayaa dhabba u kac, sida uu sheegay Bangiga Adduunka. Marka, haddii aad tahay Jinsiyad oo aad rabto inaad ka shaqeyso Uganda, waan awoodnaa
Wax ka barta Ugaandha !!
Waxaa laga yaabaa 15, 2019 Maitri Jha waxbarasho, Uganda
Diyaar ma u tahay inaad wax ku barato Uganda ?? Waa meel wanaagsan oo wax lagu barto sida arday ajnabi ah. Qiyaastii ku dhowaad 700, ardayda Mareykanka waxay wax ku bartaan Uganda sanad kasta. Letus wuxuu marka hore waxbadan ka ogaanayaa Ugandha: Ugaanda si rasmi ah ayaa loo yaqaan